Tadiavo ny orinasan'ny iPhone - Jereo ny mpandraharaha ary raha maimaim-poana izany
Jereo ny orinasan'ny iPhone-nao
Eto amin'ity pejy ity ianao dia afaka mahita hoe orinasa no iPhone-nao, izany hoe, iza amin'ireo mpandraharaha no nampifandraisina tamin'ny voalohany. Ho fanampin'izay, azonao atao ihany koa ny mahita raha mifanaraka izany fifanarahana fe-potoana na raha efa a iPhone maimaim-poana orinasa na navotsotra.
Amin'ity fomba ity dia hahitanao raha toa ka mifanaraka amin'ny fepetra nolazaina taminao ny iPhone novidianao na mikasa ny hividy ianao raha afaka mamoha ny IMEI.
1 Jereo ny orinasan'ny iPhone-nao
2 Fa maninona aho no te hahafantatra avy amin'ny orinasa iza no iPhone?
Ampiasao ity takelaka manaraka ity hahitana ny mpandrindra ny iPhone-nao:
Handray ny angona rehetra avy amin'ny iPhone amin'ny mailaka mifandraika amin'ny kaonty Paypal na ny mailaka soratanao ianao raha mandoa amin'ny carte de crédit. Raha ny mahazatra dia hahazo ny fampahalalana ao anatin'ny 5 ka hatramin'ny 15 minitra ianao, fa amin'ny tranga manokana dia mety hisy ny fanemorana hatramin'ny 6 ora.
Ny tatitra izay ho azonao dia hitovy amin'ity:
Isa isa: AB123ABAB12
Modely: IPHONE 5 16GB BLACK
Mpikirakira: Movistar Spain
Maimaimpoana: Tsia / Eny
Miaraka amin'ny fifanarahana maharitra: tsia / Eny, hatramin'ny 16 Mey 2015
Raha hamaha ny iPhone dia tsy maintsy manao izao manaraka izao / Tsy afaka mamoha ny iPhone
Raha maniry ianao dia azonao atao koa ny manamarina raha ny iPhone dia mihidy amin'ny IMEI Amin'ny fisafidianana azy amin'ny drop-down fandoavam-bola dia tsy handoa € 3 na $ 4 fotsiny ianao.
Fa maninona aho no te hahafantatra avy amin'ny orinasa iza no iPhone?
Tena misy ifandraisany amin'ny orinasa ifandraisanao, ary rehefa a Voafetra ho an'ny mpitatitra iray ny iPhone, izahay irery ihany no afaka mampiasa azy io amin'ny orinasa anaovany izany. Amin'izany fomba izany, mety ho mavesatra ny fahazoana iPhone faharoa izay tsy mifandray amin'ny orinasan-telefaona ampiasaintsika ankehitriny, ho fanampin'ny, Ny zava-misy fa maimaim-poana ny fitaovana dia sanda fanampiny ho azy, satria afaka mifandimby eo amin'ireo orinasan-telefaona samihafa izay manome zana fifaninanana bebe kokoa izahay, noho izany dia hanangona vola be.
Izany rehetra izany no ahafahan'ny serivisinay hahafantatra anao mora foana ny rehetra angona momba ny iPhone, ao anatin'izany ny mpandraharaha fananany. Amin'ity fomba ity dia azonao atao ny misoroka ny fihemorana mety azo avy amin'ny orinasan-telefaona izay nampifandray ilay fitaovana. Aza misalasala intsony, ary araraoty ny tolotra omenay.